कोशीमा ६१ शैय्याको कोभिड अस्पताल तयार, बुधबारदेखि संचालनमा आउँदै - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ कोशीमा ६१ शैय्याको कोभिड अस्पताल तयार, बुधबारदेखि संचालनमा आउँदै
कोशीमा ६१ शैय्याको कोभिड अस्पताल तयार, बुधबारदेखि संचालनमा आउँदै
अनिल श्रेष्ठ सोमबार, २०७८ जेठ ३ गते, १४:०८ मा प्रकाशित
विराटनगर–विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल परिसरभित्र छुट्टै भवनमा भेन्टिलेटरसहितको ६१ शैय्याको कोभिड–१९ अस्पताल संचालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भोलि मंगलबारसम्म कोभिड अस्पताल तयार भएर बुधबारदेखि संक्रमित राखेर उपचार थाल्ने कोशी अस्पतालका सुपरिडेन्टडेन्ड (मेसु) डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
कडा लक्षण भएका कोभिड–१९ संक्रमित बढेर अस्पतालको शैय्या भरिएर बिरामीले उपचार पाउन छोडेपछि कोशी अस्पतालले कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याउन लागेको हो । ५ शैय्याको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयु, २४ बेडको एचडीयु, ३२ अक्सिजनसहितको बेड संचालनमा ल्याउने मेसु दासले जानकारी दिए ।
अस्पतालको मेडिकल कक्ष र ग्राउण्ड फ्लोरको पोस्टमेटल वार्डलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा संचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘अहिले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ मेसु दासले भने, ‘मंगलबारसम्ममा सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर बुधबारदेखि संक्रमित राखेर उपचार गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
उनका अनुसार मेडिकल कक्ष भित्रको चार वटा कोठा रहेका छन् । यी सबै कोठामा अक्सिजनसहितको बेड राखेर कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार थाल्ने उनले बताए । ‘अहिले सीसी टिभी, वाइरिङ, शैय्यामा पु¥याउन अक्सिजनको पाइप जडानको काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘वेडको पनि व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । शौचालयको मर्मतको काम बाँकी छ । सम्भवतः मंगलबारसम्म सकिनेछ ।’
अहिले कोशी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको टोलीले संक्रमितको उपचार गर्नेछन् । ‘जनशक्ति अपुग भए थप गरिनेछ,’ मेसु दासले भने । कडा लक्षणसहितका गम्भीर प्रकृतिका कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या अहिले बढेपछि विराटनगरमा संचालित कोभिड अस्पतालहरु भरिन थालेको छ । आईसीयु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने बिरामीले बेड पाउन छोडेपछि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
त्यही भएर संघीय सरकार मातहतमा रहेको कोशी अस्पतालभित्र छुट्टै कोभिड अस्पताल संचालनको तयारी सुरू गरिएको हो । अहिले प्रदेश १ मा दैनिक थपिएका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी मोरङका रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा धेरै संक्रमित भेटिन थालेका छन् ।
३ सय सिलिण्डर आवश्यक पर्नेमा कोशीमा ८० सिलिण्डर
कोशी अस्पताल परिसरभित्र कोभिड अस्पताल संचालनमा आएपछि ३ सयभन्दा बढी अक्सिजनको सिलिण्डर आवश्यक पर्नेछन् । तर, अहिले यहाँ ७० देखि ८० वटा मात्र अक्सिजन सिलिण्डर रहेको मेसु दासले जानकारी दिए ।
‘कोभिड अस्पताल संचालनमा आएपछि अक्सिजन सिलिण्डर थप गरिनुपर्दछ । अहिले यहाँ भएका ८० सिलिण्डरले पुग्दैन,’ अस्पतालका मेसु डा. दासले भने, ‘कम्तिमा पनि ३ सय थान अक्सिजन सिण्डेर आवश्यक पर्दछ । अहिले कडा लक्षण सहितका संक्रमित बढेकोले गर्दा प्रायः अक्सिजन आवश्यक पर्ने संक्रमित आउने गर्दछन् । त्यही भएकोले हामीले अक्सिजन सिलिण्डर पर्याप्त माग गरेका छौं ।’
कोभिड अस्पताल संचालनमा आउँदासम्ममा माग गरेजति सिलिण्डर आउने स्थानीय प्रशानले जानकारी आएकोे उनले बताए । ‘केही सिण्लिडर रेडक्रस र उद्योगहरूदेखि संकलन गरेर ल्याउने स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।